कुनै बेला चमकधमक रहेको उनको जिन्दगी अहिले बेसहारा – Sandesh Press
June 14, 2021 237
उपचारको अभावले उनका यो अवस्थामा पुगेको चलचित्रकर्मी दीपक राज पाठकले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराएका छन् । उनी लेख्छन्, ‘केही दिन पहिले पहिलो पटक टिकटकमा उहाँको यस्तो नाजुक अवस्था देख्दा आँसु रोकिएन मेरो !पहिले र अहिलेको यो अवस्था देख्दा मेरो मात्र होइन देख्ने जो कोहीको आँखा रसाउछ होला सायद !? एउटा राष्ट्रको गहना निशा उपचारको अभावले जीवनमरणको दोसाँधमा छिन ।
मेरो अनुरोध? हाम्रो सानो सहयोगले निशा पुरानै अवस्थामा फर्किन सक्छिन्,’ उनले सहयोग गर्न चाहनेहरुका लागि पनि सम्पूर्ण विवरण दिएका छन् । त्यसैले सहयोगी मनहरुले सनराइज बैंकमा निशाका बुवा प्रेम प्रसाद घिमिरेको नाममा रहेको खाता नम्बर ०८४०६१३६१३२०५००१ मा सहयोग गर्न सक्नु हुनेछ । निशाको परिवारको आर्थिक अवस्था नाजुक भएका कारण सक्ने सवैमा सहयोगको लागि हार्दिक अपिल गरिएको छ । सहयोगका लागि मोडल निशाका बुवालाई सिधा सम्पर्क प्रेम प्रसाद घिमिरे ९८५१२३८९५२ मा गर्न सक्नुहुन्छ । उनको शिघ्र स्वास्थ्य लाभका भगवान् पशुपतिनाथ सँङ्ग यहि प्राथना गर्दछु
Prevभर्खरै सरकारले निषेधाज्ञा बढायो, सवारीसाधन जोरबिजोर खोल्न दिने बिषयमा दियो यस्तो सूचना